Isahluko 29 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ngosuku lapho zonke izinto zavuswa khona, Ngeza phakathi kwabantu, ngachitha izinsuku nobusuku obumnandi nabo. Kulapha kuphela lapho umuntu ezwa kancane ngokufinyeleleka Kwami, futhi njengoba ukuhlangana Kwami nabo sekuvama, ubona okunye kwalokho enginakho nengiyikho—ngalokho, uzuza ulwazi oluthile Ngami. Phakathi kwabo bonke abantu ngiphakamisa ikhanda Lami ngibuke, bese bonke beyangibona. Kodwa uma inhlekelele iwela emhlabeni, basheshe babe nexhala, bese umfanekiso Wami uyashabalala ezinhliziyweni zabo; bathuswa wukufika kwenhlekelele, bangayinaki imiyalo Yami. Ngidlule iminyaka eminingi phakathi kwabantu, kodwa ulokhu engaqapheli, futhi akangazanga. Namuhla ngimtshela ngomlomo Wami, futhi ngenze ukuba bonke abantu beze Kimi bazothola utho, kodwa bayaqhubeka nokuqhela Kimi, ngakho-ke abangazi. Uma izinyathelo Zami zinyathela yonke indawo emhlabeni, umuntu uzoqala ukuzindla ngaye, bese bonke abantu abeza Kimi bakhothame phambi Kwami bangidumise. Lolu kuzoba usuku lokukhazimuuliswa Kwami, usuku lokubuya Kwami, futhi nosuku lokuhamba Kwami. Manje, sengiqale umsebenzi Wami kubo bonke abantu, ngingene ngokusemthethweni, emhlabeni wonke, uma uhlelo Lwami lokuphatha lufika ekugcineni. Ukusuka manje kuyaphambili, noma ubani ongaqapheli angabekwa icala lokuhlomeka phakathi kwesijeziso esingenawo umusa noma ngasiphi isikhathi. Lokhu akukhona ukuthi anginazwelo, kodwa isinyathelo sohlelo lokuphatha Kwami; konke kufanele kuqhubeke ngokwezinyathelo zecebo Lami, futhi akekho umuntu ongakuguqula lokhu. Uma ngiqala umsebenzi Wami ngokusemthethweni, bonke abantu banyakaza njengoba nginyakaza, kangangoba abantu emhlabeni wonke jikelele basebenza ngokuhambelana Nami, “kunenjabulo” emhlabeni jikelele, futhi umuntu ugqugquzelwa Yimi ukuya phambili. Ngaleso sikhathi, udrago omkhulu obomvu ngokwakhe ngimfake esimweni sentukuthelo nokudideka ngokomsebenzi Wami, futhi, ngaphandle kokuthi akazimisele, akakwazi ukulandela izifiso zakhe, okungamnikezi ukuzikhethela ngaphandle “kokuthobela ukulawula Kwami.” Kuwo wonke amacebo Ami, udrako omkhulu obomvu uyisithiyo Sami, isitha Sami, “nesisebenzi” Sami; angikaze ngithule “ngezidingo” Zami. Ngakho-ke, isigaba sokugcina somsebenzi Wami wokuthatha isimo somuntu siqedelwe “endlini” yakhe. Ngale ndlela, udrago omkhulu obomvu uzokwazi ukwenza umsebenzi lowo engizonqoba ngawo ngiphelelise icebo Lami kangcono. Njengoba ngisebenza, zonke izingelosi zizongena “empini yokunquma” Nami, zinqume ukugcwalisa izifiso Zami esigabeni sokugcina, ukuze abantu emhlabeni bavune phambi Kwami njengoba zenza izingelosi, bangabi nesifiso sokungiphikisa, bangenzi lutho ebahlubukisa Kimi, lokhu yizimpawu zezinguquko zomsebenzi Wami emhlabeni jikelele.
Inhloso nokubaluleka kokufika Kwami kubantu ukusindisa bonke abantu, ukubuyisa bonke abantu endlini Yami, ukuhlanganisa izulu nomhlaba, nokwenza umuntu “athumele” “izimpawu” phakathi kwezulu nomhlaba, ngoba lokho kungumsebenzi womuntu wemvelo. Ngesikhathi ngidala umuntu, ngangilungisele umuntu zonke izinto, muva, ngavumela umuntu ukuba athole ingcebo ngamnikeza ngokwezidingo Zami. Kanjalo, ngithi kungaphansi kokuhola Kwami ukuthi bonke abantu bafinyelele namuhla. Konke lokhu kuyicebo Lami. Kubo bonke abantu, kukhona inani labantu elingebalwe elingaphansi kokuvikeleka othandweni Lwami, nenani elingebalwe lihlala ngaphansi kwesijeziso senzondo Yami. Yize bonke abantu bethandaza Kimi, kodwa abakakwazi ukuguqula izimo zabo zamanje; uma sebelahle ithemba, bangavumela imvelo kuphela ithathe indawo yayo bayeke ukungangilaleli, ngokuba lokhu yikho konke okungafezwa ngumuntu. Uma kufika esimweni sokuphila komuntu, umuntu kusafanele ukuba athole ukuphila koqobo, akakaboni ukungabi nobulungiswa, ukungajabuli, nezimo ezidabukisayo zasemhlabeni–manje, uma bekungesikho ukufika kwenhlekelele, abantu abaningi bebezoqhubeka babambelele kwiMvelo, futhi bebezoqhubeka bazibandakanye nobumnandi “bempilo”. Ngabe lokhu akukona okwenzeka ngempela emhlabeni? Ngabe lokhu akulona izwi lensindiso lelo engilikhuluma kumuntu? Kungani, phakathi kwabantu, kungakaze kube khona ongithanda ngempela? Kungani abantu bengithanda kuphela ekujezisweni nasezilingweni, kodwa kungekho ongithanda ngaphansi kokuvikela Kwami? “Nginikezile” isijeziso Sami ezikhathini eziningi kubantu. Bayasibuka, kodwa bangasinaki, futhi “abafundi badlinze” ngaso manje, ngakho konke okuza kumuntu ukwahlulela okungenamusa. Lokhu yindlela Yami eyodwa yokusebenza, kodwa isalungile ukuguqula umuntu imenze angithande.
Ngiyabusa embusweni, futhi, ngaphezu kwalokho ngibusa emhlabeni wonke jikelele; ngiyiNkosi yoMbuso neNhloko yomhlaba jikelele. Ukusukela manje kuyaphambili, ngizohlanganisa bonke labo abangebona abakhethiweyo bese ngiqala umsebenzi Wami kwabeZizwe, futhi ngizomemezela imithetho Yami yokuphatha emhlabeni jikelele, ukuze ngifinyelele ngempumelelo esinyathelweni esilandelayo somsebenzi Wami. Ngizosebenzisa isijeziso ukusabalalisa umsebenzi Wami phakathi kwabeZizwe, okusho ukuthi, ngizosebenzisa “indluzula” kubo bonke labo abangabeZizwe. Ngokusobala, lo msebenzi uzokwenziwa ngesikhathi esisodwa nomsebenzi Wami kulabo abakhethiweyo. Ngenkathi abantu Bami bebusa besebenzisa amandla emhlabeni kuzoba nawusuku lapho bonke abantu emhlabeni bezokunqotshwa, futhi, ngaphezu kwalokho kuzoba yisikhathi lapho ngizophumula khona—kulapho kuphela lapho ngizobonakala kubo bonke labo abanqotshiwe. Ngibonakala ezizweni eziyingcwele, ngizifihle emazweni angemsulwa. Bonke labo abanqotshiwe balalela phambi Kwami bazokwazi ukubona ubuso Bami ngamehlo abo, balizwe izwi Lami ngezindlebe zabo. Lesi yisibusiso salabo abazelwe ezinsukwini zokugcina, yisibusiso esihlelwe ngaphambili Yimina, futhi singeguqulwe yinoma ngubani. Namuhla, ngisebenza ngale ndlela ngenzela umsebenzi wekusasa. Yonke imisebenzi Yami ixhumene; kuyo yonke kukhona ubizo nokusabela: Akukaze kwenzeke ukuba noma yisiphi isinyathelo simiswe masinyane, kanti futhi akukaze kwenzeke ukuba noma yisiphi isinyathelo siqhutshwe ngokuzimela singahambisani nesinye. Akunjalo? Ngabe umsebenzi wesikhathi esidlule awusona isisekelo somsebenzi wanamuhla? Ngabe amazwi edlule akuwona andulela amazwi anamuhla? Ngabe izinyathelo ezedlule akuzona isiqalo sezinyathelo zanamuhla? Uma ngivula ngokusemthethweni umqulu kulapho abantu emhlabeni jikelele bajeziswa khona, lapho abantu emhlabeni jikelele bedlula ngaphansi kwezilingo, futhi uvuthondaba lomsebenzi Wami; bonke abantu bahlala emhlabeni ngaphandle kokukhanya, futhi bonke abantu baphila phakathi kwengozi yemiphakathi yabo. Ngamanye amazwi, yimpilo leyo umuntu angazange ayiphile ukusuka esikhathini sendalo kuze kube usuku lwanamuhla, futhi akekho kuso sonke lesi sikhathi oke “wajabulela” le nhlobo yempilo, ngakho ngithi ngenza umsebenzi ongakaze wenziwe ngaphambilini. Lesi yisimo sezindaba ezenzeka ngempela, futhi lokhu kuyincazelo yangaphakathi. Ngenxa yokuba isikhathi Sami siyasondela kubo bonke abantu, ngoba asibonakali sisekude kodwa siphambi kwamehlo omuntu, ubani ongesabe ngalokho? Ubani ongejabule ngalokhu? Idolobhakazi elingcolile laseBhabhiloni lize lagcina lifikile ekubhujisiweni; umuntu usehlangabezana nomhlaba omusha sha, izulu nomhlaba sekuguquliwe kwenziwa busha.
Uma ngiqhamuka ezizweni zonke nakubantu bonke, amafu amhlophe ayahlangana esibhakabhakeni angemboze. Kanjalo, futhi, nezinyoni zomhlaba ziyahlabelela zingidansele ngenjabulo, zigqamisa isimo emhlabeni, zenza ukuthi zonke izinto emhlabeni ziphile, kungabi “njengokwenzika” kodwa kunalokho ziphile phakathi kwesimo sempilo. Uma ngiphakathi kwamafu, umuntu ubona ubuso namehlo Ami lufifi, futhi ngalesi sikhathi uzizwa esabasaba. Esikhathini esedlule uzwe “amarekhodi omlando” Ngami ezinganekwaneni, ngalokho ingxenye yakhe ikholelwa Kimi kanti futhi enye ingxenye yakhe iyangingabaza. Akangazi ukuthi ngikuphi, nokuthi ubuso Bami bukhulu kanganani—ngabe bubanzi njengolwandle noma abunamkhawulo njengamadlelo aluhlaza? Akekho ozaziyo lezi zinto. Kulapho umuntu ebona ubuso Bami kuphela emafini namuhla lapho umuntu ebona ubuMina bakudala “buyabonakala,” ngakho kuba khona ukuvumelana kakhudlwana Nami, lokho kungenxa yezindaba Ngami ukuthi ukungihlonipha kwakhe kwande kancane. Kodwa umuntu akakangazi, ubona nje ingxenye Yami emafini. Ngemva kwalokho, ngelula izingalo Zami ngizikhombise umuntu. Umuntu uyamangala, abeke izandla zakhe emlonyeni, esaba kakhulu ukuthelwa phansi yisandla Sami, ngakho ufaka inhlonipho encanyana ekungibabazeni. Umuntu ugxilisa amehlo akhe ekunyakazeni Kwami konke, esaba kakhulu ukuthi uzothelwa phansi Yimina uma enganakile—kodwa ukuqashwa ngumuntu akungivimbeli, ngiyaqhubeka ngenze umsebenzi osezandleni Zami. Kusezenzweni zonke engizenzayo lapho umuntu ekhombisa umusa Kimi, bese esondela kancane kancane Kimina ukuhlanganyela Nami. Uma ngembulwa ngokuphelele emntwini, umuntu uzobona ubuso Bami, ukusuka lapho angeke ngisazifihla noma ngizifiphaze kumuntu. Emhlabeni jikelele, ngizovela esidlangalaleni kubo bonke abantu, nabo bonke labo abenyama negazi bazobona zonke izenzo Zami. Bonke labo abangabomoya bazohlala ngoxolo endlini Yami, futhi bazojabulela izibusiso ezinhle kanye Nami. Bonke labo engibakhathalelayo bazosinda ekujezisweni, futhi bazogwema ubuhlungu bomoya nokuhlupheka kwenyama. Ngizovela esidlangalaleni kubo bonke abantu ngibuse ngisebenzise amandla, ukuze ukunuka kwezidumbu kungasabikhona emhlabeni; kunalokho ukugqama kwamakha Ami kuzogcwala wonke umhlaba, ngoba usuku Lwami luyasondela, umuntu uyavuka, yonke into emhlabeni isohlelweni, futhi izinsuku “zokusinda” komhlaba azisekho, ngoba sengifikile!
UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VIII Ababi Kumele Bajeziswe Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke Isahluko 1